Kwenzekani nge-akhawunti yasebhange uma ushonile?
Owen Nkomo | November 6, 2019
Eziqeshini ezedlule siphakamise ukuthi indlela ehamba phambili yokuqinisekisa ukuthi izimpahla zakho zabiwa ngendlela obufuna ngayo wukuthi ubhale incwadi yamafa esemthethweni. Uma kwenzeka udlula emhlabeni ungenayo incwadi yamafa izimpahla zakho zizohlukaniswa ngokwe- Intestate Succession Act. Lokhu kungaholela ekutheni izimpahla zakho zabiwe ngendlela engagculisi mhlawumbe kugcine kwabelwa nabantu obungafisi babe nesabelo emafeni akho.
Encwadini yakho yamafa uyakwazi ukuzikhethela nokunquma ukuthi ufuna kwenzekeni ngezimpahla zakho. Kumele uqoke umuntu ozokwengamela uhlelo lokwabiwa kwamafa akho alandele imiyalelo yakho kusukela ekuqaleni kuze kube semaphethelweni.
Ukudlula komuntu emhlabeni kumele kubikwe kuMaster eNkantolo eNkulu kanjalo nencwadi yamafa kamufi kumele lowo owengamele amafa ayidlulisele kuMaster. U-Master uzobe esembeka ngokusemthethweni oqokelwe ukwengamela amafa. Uzokwenza lokho ngokumthumelela incwadi yokumbeka nenombolo eqondene nezimpahla noma amafa okumele abiwe. Le nombolo iyona esiyosetshenziswa kuzo zonke izindaba ezimayelana namafa kamufi uma kuxhunyanwa nehhovisi likaMaster.
Kwenzekani ngama-akhawunti akho asebhange?
I-Administration of Estates Act iyona enqumayo ukuthi wonke ama-akhawunti asebhange asegameni lalowo osedlulile emhlabeni kumele angasebenzi yingakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi wenze indlela yokwabela abathandiweyo bakho ukuze babe nemali okuzoba lula ukuthi bayithole bayisebenzise uma udlula emhlabeni. Ngokujwayelekile ama-akhawunti ayamiswa ngesikhathi kufika umbiko wokudlula komuntu emhlabeni. Imali isuke isafakwa kodwa kungavumelekile ukuthi kube khona ephumayo.
Uma esebekwe ngokusemthethweni ozokwengamela amafa kusuke sekumele avule i-akhawunti yasebhange entsha ejwayele ukubizwa nge-Estate Late Mr XYZ ngokwemigomo ebekwe yi-Administration of Estates Act. Lokhu kwenziwa ngoba uma udlula emhlabeni usuke ushiye izimpahla zakho ezisuke sezizophenduka amafa. I-akhawunti entsha yasebhange ivulwa yilowo owengamele amafa alowo osedlulile emhlabeni. Yonke imali yakhe ifakwa kuleyo akhawunti entsha yamafa.
Yonke imali engena kuleyo akhawunti isuke izoqashwa umengameli wamafa kuze kufike isikhathi sokuthi uMaster aphasise iLiquidation account (okuyisitatimende sezimpahla zikamufi nezikweletu zakhe), uma sekuqedwe uphenyo kwatholakala nokuthi akekho osanesikhalo. Umengameli wamafa uzobe eseqhubekela phambili abe amafa asonge wonke umsebenzi.
Ukwesekwa kwalowo oyigazi likamufi
Kuyenzeka kuthathe isikhathi esiphakathi kwamasonto amathathu kuya ezinyangeni ezintathu ukuthi uMaster abeke ngokusemthethweni umuntu ozokwengamela amafa. Njengoba i-Administration of Estates Act iyalela ukuthi kumiswe wonke ama-akhawunti omuntu uma sekuzwakele ukuthi udlulile emhlabeni, lokho kusho ukuthi izihlobo, okanye abantu abancike kumufi abasakwazi ukuthola imali yakhe ngesikhathi kusalindwe uhlelo lokubekwa kwalowo ozokwengamela amafa akhe.
Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi ube nohlelo oluzokwazi ukusiza umndeni noma labo abancike kuwe uma sekuzwakele ukuthi usudlulile emhlabeni ukuze babhekelele izidingo eziphuthumayo. Kulapho-ke kugqama khona ukubaluleka komshwalense wempilo ngoba wona imali yawo itholakala ngokushesha futhi iza ngqo kulabo ababhaliwe ukuthi iyoza ngqo kubona. Lokho-ke kuyokwenza isimo sibe ngcono ngesikhathi sokulinda uhlelo lwe-akhawunti yakwaMaster.
* Uma unemibuzo ngokutshalwa kwemali sicela uxhumane neClient Service Centre yethu noma i-wealth manager yakho ku-087 160 0018, noma kwi- email ethi [email protected]
- SITSHALA NONGUBENI WEZIMALI